Na-etinye bọtịnụ Retweet n'ime WordPress Blog gị Martech Zone
Na-etinye bọtịnụ Retweet n'ime WordPress Blog gị
Monday, September 21, 2009 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Twitter na-eto eto dị ka akụ dị egwu nke okporo ụzọ dị mkpa na saịtị na blọọgụ. M na-agba ndị ahịa m niile ume ka ha jiri RSS na akpaaka Twitter site na ngwaọrụ dị ka Hootsuite or Ikwusa ozi. M ga-agbakwa gị ume ka ịmekọrịta ikike nke ndị ọbịa na Tweet kpọmkwem na blog gị.
M na-anwale a ole na ole ọrụ, gụnyere ole na ole WordPress plugins… na mechara kpebie iwekota Twitter si Retweet Button. Enwere m mmasị na mmekọrịta nke mwekota na-eweta. Ọ bụ ezie na njikọta ndị ọzọ chọrọ ka ị pịa, wee nyefee site na Twitter, bọtịnụ a na-enye gị ohere ịbanye otu oge na naanị ị kwesịrị ịpị bọtịnụ Retweet na ịmechara. Ihe ọ bụla dị mfe ga-eme ka ojiji dị ukwuu karị ma a bịa na weebụ!
Offọdụ ngwa mgbakwunye anaghị enye gị ohere ịchọta bọtịnụ ahụ. Achọrọ m nke m na onye na-agụ post post. Ọ bụrụ na post m dị ihe karịrị otu ahịrị… bọtịnụ ahụ na-ada ada ebe m nwere ike itinye ya na ọdịnaya post m naanị. N'ihi ya, ejiri m aka m tinye ya na aka site na itinye koodu na-esote Ederede M na peeji nke isi m, akwụkwọ nchekwa na otu peeji na peeji ibe na isiokwu m:
Celebrity Endorsement Tweets dị Ebe a!
Ebumnuche 3 iji kpoo ụlọ ọrụ PR
Sep 22, 2009 na 8: 20 AM
dị nnọọ site na ọchịchọ ịmata ihe Doug enwere ụzọ ọ bụla iji bulie nha nke bọtịnụ ahụ - nke buru ibu ma ọ bụ nke nta
Sep 23, 2009 na 3: 46 AM
Ndewo Steven! O doro anya na ị nwere ike - ị nwere ike itinye ụdị kọmpụta ahụ site na ịgbakwunye: tweetmeme_style = 'compact'; ka edemede.
Ọkt 5, 2009 na 12:51 PM
Daalụ Douglas - nke ahụ nyere aka. Anọ m na-eji WordPress ngwa mgbakwunye mana abịara m na njikọ a wee kpebie iji ụzọ "aka"!
Ọkt 6, 2009 na 1:43 AM
Ndewo. Enwere m mmasị ịme nke a, mana enweghị m ike ịme ka ọ guzozie. Mgbe m debere ya n'elu koodu post post na ibe peeji kama ịnọdụ ala n'aka nri nke aha ya na akara ya, ọ na-akwatu aha ya. Nwere ike ịkọwa ihe m na-emehie. Daalụ.
Jun 18, 2011 na 11: 04 PM
A na-emelite nke a ka ederede na njikọ kwesịrị ekwesị jupụta n'ime ibe nwere ọtụtụ bọtịnụ Twitter dị ka ibe Index na Categdị ma ọ bụ Peeji Archive. Kwesighi itinye data-url na data-ederede na ibe ederede - Twitter ga-adọpụta ozi ahụ site na aha peeji na URL canonical.